'Nitram': Mufananidzo weAussie Serial Killer
musha	Varaidzo Nhau	'Nitram': Mufananidzo weAussie Serial Killer
by Brianna Spieldenner April 2, 2022 308 maonero
Justin Kurzel ndeimwe yechokwadi zvitoro zvinobudirira kana zvasvika kune zvinotyisa vatungamiriri. Kutanga nekunetseka zvisingaite Mhondi dzeChando mu2011, akafamba makore ese kuita mapurojekiti makuru anosanganisira akawanda akasiyana marudzi (Nhoroondo Yechokwadi yeKelly Gang, Macbeth, Assassin's Creed) achingogara achichengeta tambo yekutyisa mumapurojekiti ake. Nitram, iyo yave ichiita mafungu kuburikidza nemutambo wemutambo wegore rapera, kusanganisira Boston Underground Film Festival, kwatakazvibata, ndiko kupera kwemakore ake ehunyanzvi uye kugona kwake zvakanyanya.
Caleb Landry Jones mu "Nitram" - Nekuda kweIFC Mafirimu
Nitram harisi firimu rinotyisa mupfungwa yechinyakare, asi rinotamba nerudzi uchinamatira kune yakasviba dhirama biopic iyo iri. Caleb Landry Jones (Buda, Antiviral, Vakafa Havafe) Mumwe murume aigara nevabereki vake muAustralia anonzi Nitram akagumbuka noukama hwake nevamwe. Firimu iri rakanangana nenyaya yechokwadi yekupfurwa kwa1996 Port Arthur izvo zvakaita kuti pfuti dzibviswe muAustralia. Essie Davis (Babadook) zvakare nyeredzi mune izvi uye inoshanda seyakanaka foil kuhunhu hwaLandry.
Essie Davis mu "Nitram" - Nekuda kweIFC Mafirimu
Iyi firimu inonyatso kuenzanisa nyaya yacho zvakanaka pasina kushandisa kana kudzinga mutambi mukuru, asi achiri kumuratidza semunhu asina tsitsi. The dramatization pachayo yakaitwa zvakanaka uye inonakidza zvakanyanya. Iyi firimu raive nechiratidzo chekutungamira kukuru kwese kwaro uye rakakodzera kurumbidzwa kwese kwarinowana. Avo vari mutsotsi rechokwadie mafeni achachera iyi yakaitwa uye yakanyatso itwa ongororo yekukurudzira kuseri kwekuurayiwa kwePort Arthur.
Caleb Landry Jones naEssie Davis mu "Nitram" - Nekuda kweIFC Mafirimu
Nitram iripo yekurenda paVOD. Kana usiri kugutsikana, tarisa turera pazasi.